Attack on Himal Media
Aakar December 22, 2008
आज पत्रकार महासंघ को जुलुसमा प्रहरी ले हस्तक्षेप गरेको छ ।
प्रहरी ले बल प्रयोग गर्नु बिलकुल गलत हो !
निशेधित क्षेत्र भनेर घोषणा भै'सकेको जान्दा जान्दै, माइतिघर मण्डला मा सभा जुलुस गर्ने हो त ???
पत्रकारहरु पनि किन यति सारो मिचाहा भएका होलान् ? हिमाल मिडिया माथि आक्रमण हुनु अत्यन्तै निन्दनिय छ, यसको जति नै भत्स्रना गरेपनि कम नै हुन्छ । यसको विरुद्ध सभा, जुलुस अनि विरोध कार्यक्रम एकदम जायज छ ।
तर निशेधित क्षेत्र मै किन, कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो ??? के प्रशासन सँग निहुँ खोजेको हो ??? या के हो ?? अन्यथा, सबैलाई सुसुचित गराउनु पर्नेले आफैँ, नियम को उल्लघंन गर्ने ??? नियम को उल्लघंनगर्ने छुट त कसैलाई छैन होला ?
अरुले जंगली प्रवृति देखाएपनि, कानुन नमानेपनि, आफू जान्ने बुझ्ने ले त कानुन को परिपालना गरौँ । प्रहरीले जे गरे एक दम ठिक गरे । निहुँ नै खोजेर, निशेधित क्षेत्रमा गएपछि ठिकै त गरे ।
के एउटा समस्या पर्नेलाई जे गर्ने पनि छुट हुन्छ र ??
स्मरणिय रहोस्, यसअघि नै माइतिघर क्षेत्रलाई जुलुस, धर्ना, आमसभा, विरोध कार्यक्रम आदि निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो ।
होश गर्नुहोस्, बाँच्नु छ भने उनीहरुका बारेमा नलेख्नु रे ! उनीहरुको नराम्रो नऔँल्याउनु रे ! उनीहरुको जय जय गरेर बस्नु रे !
जति नै भत्सर्ना गरे पनि कम नै ठहर्छ, माओवादी को ज्यादती । हिजो पनि हिमाल मिडियामा तोडफोड गरे । कहिले नसुध्रने भए यिनिहरु । लाग्छ, अब यिनिहरु कतै पतन को बाटोमा त जाँदैछैनन् ।
माथिको यो अडियो सुन्नुहोस् है,हिमाल मिडिया माथि भएको आक्रमण को रिपोर्ट, अनि जम्मरकटेलसँग गरिएको अन्तरवार्ता । अनि मुल्यांकन गर्नुहोस्, यिनिहरु कत्तिको झुठ बोल्छन् । हामीलाई कसरी बेवकुफ बनाउन खोज्छन् ।
हिमाल मिडियामा गरिएको आक्रमण अत्यन्तै निन्दनिय र खेदजनक छ ।
यहाँ केही भिडियो लिंकहरु छन् । हेर्नुहोस्, हिमाल मिडिया मा भएको आक्रमण को कभरेज, साथै कुन्द दिक्षित सँग गरिएको कुराकानी !
१. हिमाल मिडिया माथि आक्रमण
२. कुन्द दिक्षित सँग गरिएको कुराकानी
Kiran Nepal, editor of Himal Khabarpatrika, briefs CA members about the attack.
Journalist Dambar Krishna Shrestha onabroken window.
The meeting room after the attack.
फोटोहरु: माईरिपब्लिका डटकम बाट लिइएको हो ।
GhodaGhodi Taal December 22, 2008 at 12:37 PM
aba chai atti bhayo. problem cha bhane negotiation bata solve garau fight garera hiana saathi ho?sarkar pani aafnai cha feri ani kina himal media ma janu paryo sarkar ka aafnai neta ka janu paryo ni agreement haru implement garna. kaile bujhne hamro kura ....
सिकारु December 22, 2008 at 2:16 PM
अहो आकार जि यो कस्तो नाटक? आफै आक्रमण गर्ने अनि उल्टै दोस चाहि मिडिया माथि हैन के गर्न खोजेका हुन यिनिहरुले? अब पतनको बाटो अंगाल्दै छन् सरकारबादिले । तर जे भएपनि हाम्रो कलमलाई कसैको धम्कि र बन्दुकको गोलेले छेक्न नसकोस् है आकार जि।।
Kamal Raj Chapagain December 22, 2008 at 4:56 PM
तपाईंलाई बाच्नु छैन त ?
आकार December 22, 2008 at 4:59 PM
जेसुकै होस्, देखेको कुरा त लेख्नै पर्छ नि !
ठरकी दादा December 22, 2008 at 8:29 PM
कस्ता जंगलीहरु रहेछन, यिनिहरुले देश के उँभो लगाउछन? अहिलेसम्म मान्छे नै बनेका छैनन् ।
Prajwol December 24, 2008 at 8:28 PM
सबैलाई चेतना भया
Prajwol November 12, 2010 at 4:33 AM
सिकारु November 12, 2010 at 4:33 AM